Imandarmedia.com.np: प्रचण्डसँग नजिकिएका बाबुरामले पार्टी एकताबारे मुख खोले ..!
Main News, Political » प्रचण्डसँग नजिकिएका बाबुरामले पार्टी एकताबारे मुख खोले ..!
प्रचण्डसँग नजिकिएका बाबुरामले पार्टी एकताबारे मुख खोले ..!
नयाँ शक्ति पार्टीको राजनीतिमा एक्लिदैँ गएका बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग आफू जिन्दगीभर सँगै रहन नसक्ने बताएका छन् ।
मंगलबार पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा भट्टराईले नेकपा माओवादीसँगको एकताको विषयमा प्रष्टिकरण दिएका हुन् । नयाँ शक्तिकै अर्का नेता परशुराम खापुङले भट्टराईलाई प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेट र एकताका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
केही समयअघि बिरामी भएका बेला भट्टराईलाई भेट्न प्रचण्ड अस्पताल पुगेका थिए ।
‘म भौतिकवादी मान्छे हो, पुर्नजन्ममा म विश्वास गर्दिनँ। होला नहोला । तर यो जन्ममा प्रचण्डसँग सँगै भँइदैन’, भट्टराईले बैठकमा भनेका हुन् ।
भट्टराईले नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्तालाई पनि प्रचण्डको खुबी नै हल्ला चलाउने भएको समेत टिप्पणी गरे ।
‘तपाईँहरू पनि प्रष्ट हुनुहोस् । प्रचण्डजीको खुबी नै हल्ला चलाउने हो, नभएको विषयमा हल्ला चलायो । उसलाई मिलायो, कसलाई फकायो, यता मिलायो’, भट्टराईले भने, ‘प्रष्ट हुनुहोस् यो जन्ममा प्रचण्ड र म सँगै भइँदैन ।’
भट्टराईले बैठकमा नयाँ शक्ति छाड्ने लहरलाई समेत सामान्य रुपमा टिप्पणी गरे । नयाँ छाडेर रामचन्द्र झा माओवादी फर्किएका छन् भने देवेन्द्र पौडेल र बामदेव क्षेत्री लगायतका नेताहरु पनि फर्कने तयारीमा छन् । नयाँ शक्तिमा एक्लिदैँ गएका भट्टराईले तन एकातिर र मन अर्कातिर नपार्न कार्यकर्तालाई सुझाए ।
‘पार्टी छाडेर जानेहरु जान्छन्। तपाईँहरू कसैलाई पीडा बोध हुन्छ भने मन एकातिर तन एकातिर नगरौँ । त्यो झन् पीडादायी हुन्छ । त्यस्तोमा प्रष्ट होउँ । आफैँले आफैँलाई पीडा दिनु हुन्न’, भट्टराईले बैठकमा भने । तत्कालिन एकीकृत नेकता माओवादी एक्लै छाडे पनि भट्टराई पक्षधर केही नेता कार्यकर्ता पछि नयाँ शक्तिमा सामेल भएका थिए । तर माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिमा आउनेहरू फर्कने क्रम तीव्र भएको छ ।
भट्टराईले नयाँ शक्ति बनाउन समय लाग्ने भन्दै कसैलाई समस्या भए छाड्न समेत सुझाए । ‘हामी समय लिएर बनाउने हो । विधानमा कार्यकारी पदमा रहने उमेर ७० राखेका छौँ, म ६४ लागेँ । ७० सम्म क्रियाशिल भएर समय दिन्छु । सबैले आआफ्नो प्रतिबद्धता गरौँ’, भट्टराईले भने । काठमाडौं टुडे
२०७४ भदौ ६ मा प्रकाशित ।